China Fithem Ks-009SBluetooth isina waya mitambo yemitambo isina mvura uye yekuzorora kumba mahedhifoni vagadziri uye vanotengesa | Kaiwansi
1. Iyo dhizaini dhizaini yeiyi headset inoshanda-inoshamwaridzika, kunze kweiyo shark fins, nzeve dzemapapiro hadzisi dzakapfava chete muzvinhu asiwo dzakanyanya kwazvo mukugadzirwa. Pachave pasina kusagadzikana kunzwa zvachose kune nzeve. Iyo ergonomic uye yakasimba kwazvo kupfeka. Uchishandisa zvakasimbiswa zvinhu, hazvidonhe nekuda kwekufamba, uye iyo isina mvura giredhi yezvinhu iIPx5.
2. Panyaya yemhando yemutinhimira, mhango yesimbi inoshandiswa kugadzira stereo yepati yakanyanya kuvhurika, resolution yacho yakawanda mabass, uye iyo frequency yakadzika yakasimba.
3. Iyo yakanyanya yepamusoro-inoshanda Bluetooth vhezheni 5.0 chip inoita kuti kubatana kuve kwakadzikama, kushomeka kwemagetsi kushandiswa, ruzivo rwakawanda, uye kunyatsoteerera kuteerera nziyo.
4.Kaputi yenzeve ine magineti inoshanda, saka panenge pasisina waya-ronda mamiriro kana nharembozha isiri kushandiswa.
5.Kutakura vhoriyamu uremu:
1 chidimbu / bhokisi
Saizi yekatoni: 43 * 27 * 27.5 CM
NET uremu: 3.8 kg
Huremu Hwose: 4.4 kg
6. Hupenyu hurefu hwebhatiri maawa gumi nemaviri, uye hautye kukanganisa basa rako kana moyo kana bhatiri parisina simba kana uri parwendo rwebhizinesi kana mukushandisa!
Pashure: Fithem Ks-816 Wireless MAKARALI USB tws headset yakaderera-treble headset inogona kuvezwa logo
Zvadaro: Fithem ks-011b isina mvura mimhanzi isina waya bluetooth mutsipa yakaturika yemitambo mahedhifoni
Fithem ks-016 Wireless redhiyo redhiyo bhandi bluetoot ...